Sida loo Beddelaan iyo Guba Wedding Video inay DVD
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan iyo Guba Wedding Videos in DVD
Maalin Your arooska waa mid ka mid ah maalmaha ugu muhiimsan iyo xusuus ah aad noloshaada. Your arooska jiri karaan music, bogagga iyo qaar ka mid ah video. Waa fikrad wanaagsan in la gubi files si aad DVD, sababtoo ah waxaad si fudud u qaybin karaan in aroosku ay u ciyaaro ee mashiinada DVD ay. Sidoo kale, DVD qaab ilaaliyaa fiican ee sanadaha soo socda. Waa hagaag, su'aashu waxay tahay sidee lagu shido arooska video inay DVD si fudud oo dhaqso? Xataa bilaabayso, oo markii ugu horeysay?
Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa fudud iyo xirfad DVD gubashadii software: Wondershare DVD abuura . Waxay awood u aad u gubi ku dhowaad dhammaan SD iyo HD video inay DVD. Sidaas aadan dhibaato ka walwasho in fiidiyo ama camera digital taageeray ama aan. Ka sokow, hortiisa ka ololaya, waxa kale oo aad isticmaali kartaa qalabka tafatirka gundhig iyo arrimo menu oo lacag la'aan ah oo ay si aad DVD video arooska heerka ku xiga. Hoos waxaan ku tusi doonaa sida si ay u abuuraan DVD video arooska ee PC si fudud ku fudud 3 tallaabo. Haddii aad tahay qof user Mac ah, oo kaliya la qaato Wondershare DVD Creator for Mac ay gubaan video arooska inay DVD ee Mac la isku tallaabooyin.
Hadda free download version maxkamad iyo socdaan iyada oo hoos ku tallaabo hagitaan talaabo talaabo.
1 dejinta arooska videos
Laba siyaabood ayaa la heli karaa si ay u dajiyaan arooska videos.
Guji "Import" badhanka xitaa folder file aad ka dibna ku shuban arooska videos.
Si toos ah jiid aad videos clips galay suuqa kala barnaamijka.
Marka aad ku shuban faylasha arooska, waa inaad ku labanlaabtaa karaa riix si aad u aragto shaashadda midig oo guji "↑" ama "↓" si ay u habayn iyo amarka. Talooyin: sawiro Wedding ayaa sidoo kale taageeray.
2 Edit arooska videos iyo abuuro DVD menu ah (optional)
Video Tani arooska inay DVD gubi siisaa gacan-ku qalabka tafatirka sida goo, Dalag, isku beddesha, codso saamaynta, dar watermark, subtitles, iwm Waxaad u isticmaali kartaa in isbedel loo baahan yahay istareexsan. Si aan ku bilaabo, riix icon qalin si ay u helaan suuqa kala edit ah.
Si aad u codsato DVD menu in la sameeyo DVD sii impresive, kaliya dooro template aad u jecel yahay oo markaa sii astaysto ah. The thumbnails, image, jir, button si buuxda u hagaajin karo, iyo waxa kale oo aad ku dari kartaa music soo jeeda, image, iyo qoraalka. Ka dib markii in, guji Falanqeynta si loo hubiyo in wax walba si sax ah waxa aad rabto.
3 Start arooska video inay DVD gubashadii
Ka dib markii ay modications loo baahan yahay, hadda oo kaliya geliso disk maran oo guji tab gubatay inay galaan suuqa kala gubatay. Dooro heerka TV, ratio screen, ka dibna ku dhuftay Guba si ay u bilaabaan video arooska inay DVD abuurka. Marka TV muujinaysaa in DVD writting dhamaystiran, disc DVD ee tuurid si toos ah.
Taasi waa! Iska bilaabay in ay abuuri karto DVD aroos u gaar ah hadda!
Sida loo Guba Muqaal in DVD
Sida loo Guba TV muujinaysaa in DVD